အခန်း(၂၀) တော်လှန်ရေးအစိုးရတော်လှန်ရေးကောင်စီမှ အာဏာသိမ်းခြင်း - Myanmar Political Research Organization
Home » history-2 » အခန်း(၂၀) တော်လှန်ရေးအစိုးရတော်လှန်ရေးကောင်စီမှ အာဏာသိမ်းခြင်း
အခန်း(၂၀) တော်လှန်ရေးအစိုးရတော်လှန်ရေးကောင်စီမှ အာဏာသိမ်းခြင်း
တော်လှန်ရေးအစိုးရတော်လှန်ရေးကောင်စီမှ အာဏာသိမ်းခြင်း၁ (၁။ ဝိဓူရသခင်ချစ်မောင်၏ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် မြန်မာပြည်နှင့် ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီး နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း။)
နိုင်ငံတော်၏ အခြေအနေမှာများစွာ ယိုယွင်းပျက်စီးလာပြီး အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ကွဲကြေပျက်စီး ရတော့မည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာလေပြီ။ အသံလွှင့်ရုံတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်၌ ကျင်းပသောအစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များ ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်း မပြေလည်ပေ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံစည်းဝေးပွဲကြီးကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပပြန်သည်။ ထိုအစည်းအဝေးပွဲကြီး တွင် ဖက်ဒရယ်မူမရလျှင် ခွဲထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်သံက ပိုမိုကျယ်လောင်လာသည်။ ရှမ်း စော်ဘွားဟောင်းများသည် ချက်ချင်းလက်ငင်းပင် ခွဲထွက်ရန်ပြင်ဆင်လာကြသည်။ ထိုနေ့မှာပင် အစိုးရကနိုင်ငံခြားသွင်းကုန် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများကိုပြည်သူပိုင် သိမ်းပိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။ သို့သော် ထိုကြေညာချက်မှာ ဦးနုခေါင်းဆောင်သော ပထစ အစိုးရ၏ နောက်ဆုံးကြေညာချက်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်၊ ညသန်းခေါင်စီ ကျော်ပြီး မတ်လ ၂ ရက်သို့အကူးတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့်ဝန်ကြီးအချို့၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အချို့၊ အစိုးရအရာရှိကြီးအချို့ကို တပ်မတော်ကလိုက်လံ၍ ထိန်းသိမ်းလိုက်သည်။ နံနက်တွင်အချို့ကို ပြန်လွှတ်ပေး သည်။ မတ်လ ၂ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီ၊ မိနစ် ၅ဝ အချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနိုင်ငံတွင်ယိုယွင်းလာသည့် အခြေအနေဆိုးများကို အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် တပ်မတော်ကတာဝန်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ပြည်သူတို့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမရှိဘဲ အလုပ်အကိုင် လုပ်မြဲ လုပ်ရန်၊ ၁ဝ တန်းကျောင်းသားများ စာမေးပွဲ ဖြေမြဲ ဖြေရန် နှိုးဆော်ကြောင်း၊ ပြည်သူတို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာရန်အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အသံလွှင့်၍ ကြေညာသည်။
သို့နှင့် ကိုလိုနီစနစ်၏ အမွေဆိုးတစ်ရပ်ဖြစ်သော ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကြီးသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်တွင် တစ်ခန်းရပ်၍ ချုပ်ငြိမ်းသွားရလေပြီ။ တပ်မတော်သည် သမိုင်း၏လိုအပ်ချက်အရတောင်းဆိုလာသည့် တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်၍ ခေတ် ပြောင်းတော်လှန်ရေးကြီးကို စတင်ဆင်နွှဲလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ မတ်လ ၃ ရက်တွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် လူမျိုးစုလွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အရင်းရှင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ လုံးဝပြိုကွဲသွား ရတော့သည်။ မတ်လ ၄ ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက ပထစ၊ ပမညတနှင့် ဖဆပလနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ကြီး သုံးရပ်မှ ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ လုပ်ရပ်ကို ရှင်းပြသည်။ မတ်လ ၅ ရက်တွင် ပမညတအဖွဲ့က တော်လှန်ရေး ကောင်စီကို ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာသည်။ မတ်လ ၈ ရက်တွင် ကြေညာချက်အမှတ် (၂၅)ဖြင့် ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်စိမ်းလက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ငန်းကိုလည်း ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ဝ ရက်တွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို ကြေညာသည်။
တပ်မတော်သည်ပြည်တွင်းပြည်ပရန်သူများကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန် တာဝန်တစ်ရပ်တည်းသာမက တော့ဘဲ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော နိုင်ငံတော်အား ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကြီး ဆင်နွှဲ၍ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးတာဝန်ကိုပါ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်မှစ၍ ထမ်းဆောင်ရလေတော့၏။
ဖဆပလခေါင်းဆောင်များက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို လက်ခံကြောင်း၊ အခြေ အနေ တည်ငြိမ်လာသောအခါ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကို ပြန်လည်အသက်သွင်း၍ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရသည် အိမ်စောင့်အစိုးရမဟုတ်ပေ။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက သင်ခန်းစာရခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တော်လှန်ရေး ကောင်စီသည် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လုံးဝ ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်သည်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ကို အချိန်ယူရေးဆွဲ၍ ချမှတ်သည်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို အမြုတေပါတီအဖြစ် ဖွဲ့စည်းလိုက် သည်။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါက်တာမောင်မောင်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း စာအုပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြခဲ့သည်။
''ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို ယခင်အခါများကလည်း မြန်မာခေါင်းဆောင်တို့ တွေးခေါ်အိပ်မက်ဖူးသည်။ လက်ဝဲညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ကာ ဆိုရှယ်လစ် စီမံကိန်းများကို ဇောက်ချ၍ လုပ်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သောင်းကျန်းမှုများကြောင့် တောင့်တသော လက်ဝဲ ညီညွတ်ရေးဝေးခဲ့ရသည်။ လက်ဝဲညီညွတ်ရေးမဖြစ်၍ သောင်းကျန်းမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရလေသည်လား။
''ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဂျပန်ပြည်တွင်ရှိစဉ် ကပင် မြန်မာပြည်သစ်အတွက် သင့်တော်သော ပုံစံ ကြမ်းကို စိတ်ကူး၍ ရေးသားခဲ့လေသည်။ ဆိုရှယ်လစ် စကား နားခါးသော ဂျပန်တို့နှင့် ဆက်ဆံနေရသော ကြောင့် ယင်းဝေါဟာရကိုမသုံးသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏အဓိပ္ပာယ်သည် ရှင်းလင်းနေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ ရည်မှန်းချက်သည် ကိုယ့်တိုင်းပြည် အခြေအနေနှင့်သင့်တော်သော လွတ်လပ်သည့် သမ္မတ နိုင်ငံထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရင်စနစ်ကို ပြန်လည် ထူထောင်ရန် မသင့်တော်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့ရာဇဝင်မှ ထင်ရှားသည်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလျှင် အားလုံး ကောင်းသည်။ ခေါင်းဆောင်ပျက်လျှင် အားလုံးပျက် သည်။၁
''အခြေခံဥပဒေဖြင့်ထိန်းထားသော ဘုရင်စနစ် သည်လည်း မြန်မာပြည်နှင့်မသင့်တော်''ဟု ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းထင်မြင်သည်။
မြန်မာပြည်သူတို့သည် ပြတ်သား၍ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်မှုကို လိုချင်သည်။ အခြေခံ ဥပဒေဖြင့် ထိန်းထားသော ဘုရင်စနစ်ဟူသည် အပေါ် ယံသာ ဘုရင်စနစ်ဖြစ်သော်လည်း အနှစ်သာရအား ဖြင့် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်သည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီ လူစွမ်းကောင်းလုပ်ခြင်းကို အားပေး သည်။ တစ်ဦးစီက အုပ်ချုပ်ရေးကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်မှာ အင်အားရှိသော နိုင်ငံ တော်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်သည်။ ညီညွတ်သော တစ်နိုင်ငံ နှင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကိုသာ လိုချင် သည်။ ပါလီမန်အတိုက်အခံပုဂ္ဂလိကဝါဒကို မလိုချင်။ အများအကျိုးက ပုဂ္ဂလိကအကျိုးထက်အရေးကြီး သည်။၂ (၂။ ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း စာမျက်နှာ ၄၃ဝ၊။)
ခေါင်းဆောင်ကောင်းမပေါ်ထွက်လျှင် မည်သို့ လုပ်မည်နည်း။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သူ့မေးခွန်းကို သူဖြေသည်။
ပါတီက ခေါင်းဆောင်ကောင်းကောင်းမွေးထုတ် လိမ့်မည်။ ပါတီသည် လျော့ရဲရဲပါတီမျိုးမဟုတ်။ စည်း ကမ်းကျနကျစ်လျစ်သော ပါတီဖြစ်လိမ့်မည်။ ပါတီတွင်း ဂိုဏ်းဂဏများပေါ်ထွက်၍ ပြဲကွဲခြင်းများ မဖြစ်ပေ ဘူးလား မေးဖွယ်ရှိသည်။ အဖြေမှာ ဤသို့သော ပါတီ မျိုးတွင် ဂိုဏ်းဂဏပေါ်ပေါက်ခဲသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ် စေ အစိုးရခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် ရှည်ကြာစွာ လုပ်နိုင်စေ ရန် တစ်ပါတီစနစ်ကို လိုသည်။ အမြဲတစေ ဤစနစ် သာ ကောင်းမည်ဟုကား မဆိုလိုပါ။
ညီညွတ်ရေးသည် အဓိကကျသည်။ တိုင်းရင်းသား များကို ဗြိတိသျှတို့က ခွဲခြားထားခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသား တို့အား ပြန်လည်၍ စည်းလုံးအောင် စည်းရုံးရမည်။ မျှတတူညီစွာဆက်ဆံ၍ အမျိုးသားစိတ် မွေးမြူပေးရ မည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြုပြင်ကာ ပို၍ ကူးလူး ဆက်ဆံကြရမည်။
မြန်မာပြည်သစ်တွင် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြှင့် တင်ပေးရမည်။ လူဦးရေများပြားလာအောင် စောင့် ရှောက်ရမည်။ ပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စည်းကမ်း၊ အကျင့်စာရိတ္တ တိုးတက်စေအောင် ကြိုးပမ်း ကြရမည်။ ကြိုးနီစနစ်ဖြင့် နှေးကွေးလေးလံနေသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ထိရောက်လွယ်ကူအောင် ပြုပြင် ပေးရမည်။ တရားဥပဒေစနစ်ကို ပြင်ရမည်။ လူဝင်လူ ထွက်ကို ကြီးကြပ်ရမည်။ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းပေးရမည်။ မသင်မနေရ အခြေခံပညာရေးစနစ် ထူထောင်ရမည်။ ပညာရေး သည် ဘဝနှင့်ပို၍ ထင်ဟပ်နိုင်ရမည်။ သိပ္ပံပညာကို အားပေးရမည်။ ဆင်းရဲသားတို့၏ြေ<ွကးမြီများကို လျှော်ပစ်ရမည်။ အမြတ်ကြီးစား၍ ငွေတိုးချေးခြင်းကို ထိန်းရမည်။ မြေပိုင်ရှင်စနစ်ကို ပြုပြင်ရမည်။ လယ်လုပ် သူတို့သာ လယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ စက်မှုလယ်ယာစနစ် သို့ ပြောင်းရမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများကို ထူထောင်ရ မည်။ သတ္တု စသော သယံဇာတပစ္စည်းများကို ကြိုးပမ်း ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းငယ်များကို အားပေးရမည်။ ထွက်ကုန်ဝင်ကုန်ကို စနစ်ကျကျ ကြီးကြပ်ရမည်။၁ (၁။ Aung San ''Blue Print For Free Burma" The Guardian Magazine, Mar 1957.)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် နိုင်ငံကိုထူထောင်ရာတွင်လည်းကောင်း ခိုင်မာတောင့် တင်း၍ အင်အားကောင်းသော နိုင်ငံရေးဦးဆောင် ပါတီကြီးတစ်ရပ်ရှိသင့်သည်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ ယင်း ပါတီသည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ထောက်ခံသော ပြည်သူ့ပါတီဖြစ်ရမည်။ စင်ပြိုင်ပါတီများမရှိဘဲ တစ်ပါတီတည်း၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တစ်သွေး၊ တစ်သံ၊ တစ်မိန့်တည်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ချီတက်ရ မည်ဟု တွေးခေါ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထူထောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျှော်မှန်း သကဲ့သို့ ဖြစ်မလာပေ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရှိစဉ်ကပင် နှစ်ပါတီသို့ကွဲသွားပြီး လွတ်လပ်ရေးရပြီးသော အခါတွင်ကားလက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူများဘဝ သို့ ရောက်သွားရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ အဖွဲ့ကို နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးရည်မှန်းချက်ဖြင့် ထူထောင်ခဲ့ပြန်သည်။ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံအဖွဲ့သည် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းသွားသည်။ ပါတီစုံပါဝင်သော ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးသည် ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးကို ဆင်နွှဲခဲ့ရုံသာမက လွတ်လပ်ရေးကို ရရှိသည်အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဖဆပလ အဖွဲ့ကြီးသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျှော်မှန်းခဲ့သော နိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင် ပါတီကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်၍မလာပေ။ ဆိုရှယ်လစ်များမှာ ဖဆပလမှ ခွဲသွားခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ ရဲဘော်တွေ တောခိုကြသည်။ သို့နှင့် လက်ဝဲအင်အား စုများသည် တောထဲရောက်သူကရောက်၊ အတိုက်အခံ ပါတီဖြစ်သူကဖြစ်နှင့် အစိုးရတာဝန်ယူထားရသော ဖဆပလအဖွဲ့တွင် လက်ယာဝါဒီများသာ ကျန်ရစ်သည်။ နောက်ဆုံး ဖဆပလသည်ပင်လျှင် နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ရသည်။ ကွဲထွက်သွားသော အုပ်စုနှစ်စုသည်လည်း အစိတ်စိတ် အမြွှာမြွှာ ထပ်၍ ကွဲခဲ့ပြန်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းသည် လက်ဝဲညီညွတ်ရေးကို အကြိမ်ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းရန် အကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ လက်ဝဲစွန်းရောက် ကွန်မြူနစ်သောင်းကျန်းသူများကို အားကိုး၍ မဖြစ်နိုင်သဖြင့် မြေပေါ်နိုင်ငံရေးသမားများ ကို အားကိုးခဲ့သည်။ သို့သော် ပါတီစုံ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ စနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအား ထိန်းသိမ်းပဲ့ပြင်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ပြည်သူများသည် မြေအောက်သောင်းကျန်းသူ များနှင့် မြေပေါ်နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခများ၏ဒဏ်ကို လည်စင်း၍ ခံနေကြရသည်။ ပြည်သူတို့၏ လိုအင် ဆန္ဒနှင့်အညီ ထမ်းဆောင်ခြင်းသည် သမိုင်းပေးတာဝန် ဆန္ဒနှင့်အညီ ထမ်းဆောင်ခြင်းသည် သမိုင်းပေးတာဝန် ကို ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တော်လှန် ရေးကောင်စီသည် စနစ်ဟောင်းကို လုံးဝဖြိုဖျက်လိုက် ခြင်းဖြင့် မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကို ချုပ်ငြိမ်းစေ လေသည်။ ထို့နောက် တစ်ပါတီ နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မျှော်မှန်းခဲ့သော ဆိုရှယ်လစ်ပန်း တိုင်သို့ ချီတက်ကြရန် တစ်ပြည်လုံးသို့ နှိုးဆော်လိုက် လေတော့၏။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ၁၉၄၈-၄၉ ခုနှစ် တောခိုခါစကာလများတွင် အင်အားအသင့်အတင့် ကောင်းခဲ့သော်လည်း ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် အင်အားမှာ သိသာစွာ လျော့ကျသွားသည်။ အချိန်ကြာသည်နှင့် အမျှ လုံးပါးပါး၍လာသည်။ ပါတီစတင်ပေါ်ပေါက်ချိန် မှစ၍ သခင်စိုး၏ခေါင်းဆောင်မှု၊ သိန်းဖေမြင့်၏ ခေါင်းဆောင်မှုတို့ကိုဖြိုချ၍ ပါတီခေါင်းဆောင်မှုကို ရယူခဲ့သော သခင်သန်းထွန်းသည်ပင်လျှင် ပါတီတွင်း ခေါင်းဆောင်မှု ကျဆင်းလာသည်။၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်၏ထိုးစစ်များကြောင့် တိုင်း(၃)အုပ်စုနှင့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ သောင်းကျန်းသူများ အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက်လက်နက်ချကြလေရာ ပါတီသည် ပြိုကွဲလုနီးပါး ဖြစ်သွားရသည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ရဲထွဋ်ကို အစိုးရထံစေလွှတ်၍ လက်နက်ချ အလင်းဝင်ရေးကို ကြိုးစားလာရသည်။ သို့သော် ထိုအချိန်မှာပင် ဖဆပလနှစ်ခြမ်းကွဲလေရာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ သည် အစိုးရ၏ပြိုကွဲချည့်နဲ့မှုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ လက်နက်ချရေးလမ်းစဉ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်တော့သည်။
အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက်တွင် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် တပ်မတော်၏ထိုးစစ်များမှ ရှောင်တိမ်းပြေးလွှားနေရသည်။ ပထစအစိုးရလက် ထက်သို့ ရောက်သောအခါ မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခ များ ပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်။ အစိုးရသည် နိုင်ငံ၏ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို မဆောင်ရွက်နိုင်ချေ။ တပ်မတော် သည် မဲခေါင်စစ်ဆင်ရေးကြီးကိုဆင်နွှဲ၍ ပြည်ပကျူးကျော်သူ ကေအမ်တီများကို နှိမ်နင်းနေရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ညံ့ဖျင်းသောဒေသများတွင် ခိုအောင်း ၍ လှုပ်ရှားနေရ သည်။ အလုံးအရင်းအလိုက် လှုပ်ရှား နိုင်ခြင်းကားမရှိပေ။
အလံနီပါတီသည် ပင်မကွန်မြူနစ်ပါတီကြီးမှ ခွဲထွက်လာပြီးသည့်နောက် ဆူပူအြုံ<ွကရေး လှုပ်ရှားမှု များကိုသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တဖြည်းဖြည်းလူမုန်းများ ၍ လာလေသည်။ လက်ဝဲအလွန်အကျွံဝါဒီများ ဖြစ် သောကြောင့် ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုကို မရပေ။ အင်အားမှာလည်း တဖြည်းဖြည်း ယုတ်လျော့၍လာ သည်။ လှုပ်ရှားရာနယ်မြေမှာလည်း ကျဉ်းမြောင်းလာ သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဆက်ဆံရေးမှာ လည်း မည်သည့်အခါမျှ အဆင်ပြေခြင်းမရှိပေ။ ဧရာ ဝတီ အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသတွင် ခိုအောင်းနေစဉ် တပ်မတော်၏ ထိုးစစ်များကြောင့် အလံနီများသည် ရခိုင်ရိုးမပေါ်သို့ ထွက်ပြေးခိုအောင်းကြရသည်။
ရခိုင်တွင်ရှိနေသော ဗုံပေါက်သာကျော်အဖွဲ့သည် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် လက်နက်ချ၍ ချုပ်ငြိမ်းသွားသည်။ ဦးစိန္တာ၏ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့သည်လည်း ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် လက်နက်ချအလင်းဝင်သွားသည်။ သခင်စိုး ၏ အလံနီပါတီသည် ဦးစိန္တာ၏ တပည့်ရင်းဖြစ်သူ ကျော်ဇံရွှီးနှင့် နောက်လိုက် ၃ဝ ခန့်ကို ဖဲ့ထုတ်၍ စည်းရုံးထားလိုက်နိုင်သည်။ သို့သော် ကျော်ဇံရွှီးတို့အဖွဲ့ သည် သခင်စိုး၏ဇနီးဖြစ်သူ မငွေစံနှင့် မသင့်မတင့် ဖြစ်ရာမှ ပစ်ခတ်ကြသည်အထိ ပဋိပက္ခဖြစ်လာသော ကြောင့် အလံနီပါတီမှ လုံးဝခွဲထွက်လိုက်သည်။ ကျော်ဇံ ရွှီးက ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟု သီးခြားလှုပ်ရှားသည်။ သခင်စိုး၏ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီမှာမူ ရခိုင်ကွန်မြူ နစ်များကို မဟာမိတ်ဖွဲ့၍ ရခိုင်ရိုးမတွင်သာ ခိုအောင်း နေရလေသည်။
ကေအင်န်ယူအဖွဲ့သည် တောခိုခါစကာလတွင် ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေးအမြင်နှင့် စစ်ရေးဝါဒ သက်သက်ကိုသာ ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ တပ်မတော်၏ ထိုးစစ်များကြောင့် ကေအင်န်ဒီအိုလက်နက်ကိုင်တပ် များ အရေးနိမ့်လာသောအခါ စစ်ရေးဝါဒသည် ကျဆုံးလာသည်။ ထိုအခါ ကရင်သောင်းကျန်းသူအချို့ သည် မာ့ခ်စ်လီနင်ဝါဒကို ကြွေးကြော်လာကြသည်။ ကေအင်န်ယူအဖွဲ့ကို ပါတီပုံစံမျိုးပြန်ဖွဲ့ကြသည်။ ကေအင်န်ယူများ သည် ဒုတိယလမ်းစဉ်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ကြသည်နှင့်အလိုလိုပင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ၏ သြဇာခံဖြစ် သွားကြသည်။ သို့သော် အရှေ့ ကော်သူးလေခေါ် စစ်တောင်းမြစ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းနှင့် သံလွင်ခရိုင်မှ ကေအင်န်ဒီအို များက မာ့ခ်စ်လီနင်ဝါဒ ကို လက်မခံခဲ့ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ကေအင်န်ယူသောင်း ကျန်းသူများ၏ပုံစံမှာ အတိအလင်း နှစ်ပိုင်းကွဲပြားခြင်း မရှိသော်လည်း နှစ်ပိုင်းကွဲသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်နေသည်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအခြေအနေ ဆိုးရွားလာသောအခါ နောက်မြီးဆွဲပါတီဘဝသို့ရောက်နေ သော ကေအင်န်ယူများသည်လည်း အလိုအလျောက် အခြေအနေ ဆိုးရွားလာသည်။ လက်အောက်ခံတပ်သား များကိုလည်း မထိန်းသိမ်းနိုင်သဖြင့် ဆက်ကြေးကောက် ခြင်း၊ လူသတ်ခြင်း၊ အဓမ္မကျင့်ခြင်းတို့ကို မြောက်မြား စွာ ကျူးလွန်ကြရာ ကေအင်န်ယူများကို ကရင် တိုင်းရင်းသားများကပင် မုန်းတီး၍လာသည်။ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကေအင်န်ယူနှင့် လူအင်အား ၅ဝ ခန့်သာရှိသော မွန်သောင်းကျန်းသူများသည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစု(မဒညတ)ကို ဖွဲ့ စည်းထားသော်လည်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ လက်ဝါးကြီးအုပ် ချုပ်ကိုင်မှုကြောင့် မည်သို့မျှ စွမ်း ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။
ရှမ်းသောင်းကျန်းသူများမှာ အလုံးအရင်းဖြင့် စစ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ပြောက်ကျားလှုပ်ရှားမှုများကို သာ ဆောင်ရွက်နေနိုင်ကြသည်။ မူဂျာဟစ်များမှာ လည်း နယ်ခြားဆန်မှောင်ခိုဂိုဏ်းအဖြစ် လျှောကျသွား ပြီဖြစ်သည်။ ကေအိုင်အေသောင်းကျန်းသူများမှာ စတင်ထကြွစပင်ဖြစ်သော်လည်း ဘာသာရေး၊ လူမျိုး ရေးကိုအကြောင်းပြု၍ တဖြည်းဖြည်း အင်အားတိုးပွား ၍လာနေသည်။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်၏ အမွေဆိုးကြီးဖြစ်သော ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသည် ပါတီစုံ ပါလီမန်ဒီမိုကရေ စီခေတ်တွင် အစွမ်းကုန် ထကြွသောင်းကျန်းခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုများသည် တပ်မတော်၏ ထိုးစစ်များကြောင့် ချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်သင့်ခဲ့ သော်လည်း မြေပေါ်နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခများကြောင့် ဆက်လက်၍ သက်ဆိုးရှည်ခဲ့ရသည်။ ပါတီစုံ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် ကိုလိုနီခေတ်၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်သော ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုကို မနှိမ်နင်းနိုင်ရုံ သာမကဘဲ နိုင်ငံအတွင်း၌ ပြည်တွင်းစစ်မီးကြီး တောက်လောင်တော့မည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက် စေခဲ့သည်။ ကေအိုင်အေကဲ့သို့ သောင်းကျန်းသူများ သည် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြောင့် အသစ်ပေါ် ပေါက်လာသော သောင်းကျန်းမှုဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီက သမိုင်းပေးတာဝန်အရ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ထိန်းသိမ်းလိုက်သောအခါတွင် ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုမီးသည် ဆက်လက်တောက် လောင်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သည် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရင်း ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်နှင့် အရင်းရှင်ပါလီမန်စနစ်၏ အမွေဆိုးကြီးဖြစ်သော ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုကို စစ်ရေးအရ ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းနေရဦးမည်ဖြစ်လေသည်။
(၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်အထိ)
၁။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာမှ စာရွက်စာတမ်းများ။
၂။ စစ်နှလုံးသတင်းစဉ်များ၊ စစ်ရုံးပညာရေးဌာနခွဲ မှ ထုတ်ဝေသည်။ (၁၉၅၂ ခုနှစ်)။
၅။ တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန်
(ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း)တင်မောင် ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ချစ်မြိုင်စာပေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအနောက်ဘက်တန်း၊ ရန်ကုန်။
၆။ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေး၊ စတုတ္ထ စစ်လက်ရုံး။
၇။ နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း၊ စတုတ္ထစစ်လက်ရုံး။
၈။ နိုင်ငံတော်ဝါဒ ကာကွယ်ရေး၊ စတုတ္ထစစ်လက်ရုံး။
၉။ နိုင်ငံတော်အရေး၊ စတုတ္ထစစ်လက်ရုံး။
၁ဝ။ ပင်လုံစစ်တမ်း၊ ဦးအုန်းဖေ (ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီး အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း) ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် စံပယ်ဦးစာပေ ၂၃၅/၂၃၇၊ ဘားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ဖြန့်ချိသည်။
၁၁။ ပြည်တော်သာခရီး (ပထမတွဲ)၊ ဦးသန့် ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်း။
၁၂။ ပြည်တွင်းစစ် ၁၁ နှစ်မြောက်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စစ်တမ်း။
ဗိုလ်ညွန့်မောင်နှင့် အလင်းရောက် ရဲဘော်များ၊ အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဌာန။(၁၉၅၉ ခုနှစ်)။
၁၃။ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း၊ စတုတ္ထ စစ်လက်ရုံး။
၁၄။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းဝင်စာချုပ် စာတမ်းများ၊ ရဲဘော်လှမျိုး (၁-၁၂-၆၈) နံ့သာ တိုက်၊ ၁၃/၁ဝ၇ လမ်း၊ တောင်ညွန့်၊ ရန်ကုန်။
၁၅။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ မူလအဓိက မော်ကွန်းများ၊ စတုတ္ထ စစ်လက်ရုံး။
၁၆။ ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း (နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ)၊ ရခိုင် ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ကောင်စီ (၁၉၈၆ ခုနှစ်)။
၁၇။ မန္တလေးမြို့၏ည၊ ကြီးပွားရေးဦးလှ (လူထုဦးလှ)၊ လူထုသတင်းစာတိုက်နှင့် ကြီးပွားရေး စာပုံနှိပ် တိုက်၊ ၈၄ လမ်း၊ လက်ဆည်ကန်၊ မန္တလေး။
၁၈။ မုန်တိုင်းလွန်သော် (ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း) တင်မောင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ချစ်မြိုင်စာပေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး၊ အနောက်ဘက်တန်း၊ ရန်ကုန်။
၁၉။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း၊ ဒေါက်တာမောင်မောင် ၂၇၊ မတ်လ၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ပုဂံစာအုပ်တိုက် ၁၂၃၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်တော်ကလေး၊ ရန်ကုန်။
၂ဝ။ ရန်သူ့ဝါဒဖြန့်မှု ကာကွယ်ရေးစတုတ္ထစစ်လက်ရုံး။
၂၁။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ၊ ဗိုလ်သိမ်းဆွေ။ လုပ်သား ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၃၅/၄၆ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပုံနှိပ် ပြီး မျိုးညွန့်စာပေ ဖြန့်ချိရေး၊ ၂၈၉/၂၉၃ မောင်ထော်လေးလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ဖြန့်ချိသည်။ (၁-၄-၆၇)။
၂၂။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် မြန်မာပြည်၊ ဝိဓူရ သခင်ချစ်မောင် (ပထမအကြိမ်)၊ ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ။
၂၃။ သမိုင်းတစ်ခေတ်သစ်ခဲ့ပြီ၊ သခင်တင်မြ၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ဦးအေးမောင်၊ အမှတ် ၁၈၄၊ ၃၂ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ကထုတ်ဝေပြီး မြဝတီ ပုံနှိပ်တိုက်တွင် ရိုက်နှိပ်သည်။
၂၄။ သောင်းကျန်းမှု ဒဏ်ချက်များ၊ စတုတ္ထစစ်လက်ရုံး။
၂၅။ ကော်သူးလေတော်လှန်ရေး စစ်တမ်း၊ အလင်း ရောက် ကော်သူးလေရဲဘော်များ၏ တင်ပြချက်၊ စောမောင်တိုးနှင့် အလင်းရောက်ရဲဘော်များ၊ အစိုးရပြန်ကြားရေးဌာန (၁၉၅၉ ခုနှစ်)။
၂၆။ အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်မှူး အေးချို၊ တက္ကသိုလ် စိန်တင် ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်။ ညောင်ရမ်းစာအုပ်တိုက်၊ ၃၁/၁၂ ကြို့ကုန်းရိပ်သာ၊ အင်းစိန်။
၂၇။ Burma and the Insurrections (1949) အစိုးရပြန်ကြားရေးဌာန။
၂၈။ Burma's Constitution by Maung Maung (1959).).
၂၉။ Kuomintang Aggression Against Burma (1959).
၃ဝ။ သေမင်းကို သစ္စာနှံသည်၊ ဗိုလ်မြင့်၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အေးမြင့်စာပေ၊ ၇၂ - ဈေးကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Posted by Myanmar Political Research Organization at 9:38 AM